मुख्य खबर Archives - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखाको धार्चे ४ मा निर्माणाधीन अपर माछाखोला जलविद्युत आयोजनाको ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आउँदो नयाँबर्षभित्र विद्युत उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने लक्ष्य रहेको प्रवद्र्धक विकास हाइड्रोपावर कम्पनीले जनाएको
गोरखामा कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या ८ रहेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका अनुसार मंगलवार ९ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा एकजना थपिएसँगै मंगलबार सक्रिय संक्रमितको संख्या ८ पुगेको हो । गोरखा
जिल्ला समन्वय समिति गोरखाले कात्तिक १४ र १५ गते वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम गर्ने भएको छ । सोमवार बसेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले समिक्षा कार्यक्रमको मिति तय गरेको हो । गत
गोरखा नगरपालिकाले किसानलाई उन्नत जातका गाई दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कार्यक्रम अन्तरगत उप प्रमुख सबल नेतृत्व विकास कार्यक्रम मार्पत गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १४ का किसानलाई ११